TTSweet: November 2009
Posted by T T Sweet at 10:23 AM 8 comments:
" ဒီအိမ်က သင်းမက် နံ့ ရတယ်ဟေ့ "
" ဒီနားကဖြတ်သွားတိုင်း သင်းမက် နံ့ ကို သင်းနေတာပဲ ... "
မဆွိတီတို့ ငယ်ငယ်က အိမ်နားက ဖြတ်သွားဖြတ်လာကြတဲ့ အိမ်နီးနားချင်းတွေက စ သလိုလို နောက်သလိုလိုနဲ့ ပြောသွားလေ့ရှိတဲ့ စကားသံလေးပါ။
သင်းမက် ဆိုတာဘာလဲ ...
သင်းမက်ဆိုတာ အင်္ဂလိပ် အမည်တစ်ခု။ အနံ့အင်မတန်ပျင်းတဲ့ အင်ဒရင်းလို ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးဆိုရင် စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ထူးဆန်းနေတော့မှာ။
ဟုတ်ပါတယ်။ မဆွိတီတို့ငယ်ငယ်က အဖေရော အမေရော ၀န်ထမ်းဆိုတော့ သားသမီး ၅ယောက်ကို ကျောင်းထားနိူင်ဘို့ ဆိုတာ လစာတစ်ခုတည်းကို အားကိုးနေလို့ မရပါဘူး။ ဘေးပေါက်ဝင်ငွေရအောင် ကိုယ့်တစ်နိူင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးလေးတွေ လုပ်ပြီး မိသားစုခါးလှဘို့ စီးပွားရှာရသေးတယ်။ စနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး ရူးတောင်ထမင်းမငတ် ဆိုတာ မှန်တယ်လို့ အဖွားပြောတတ်တာ သတိရတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားအဖေနဲ့ စနေသမီးအမေတို့ ဘာစီးပွားရေးလုပ်လုပ် အတူတူလုပ်တာချင်း သူများထက် အမြဲတစ်ပန်းသာနေခဲ့တယ်။ မိသားစုတွေ မခိုမကပ်ပဲ ကျိုးကျိုးစားစား တက်ညီလက်ညီလုပ်ကြတာလဲပါမယ် ထင်ရဲ့။ စံပြမိသားစုလို့ ခေါ်တာတောင် ကြားခဲ့ ရဘူးတယ်။
၀က်တွေမွေးတုံးကလဲ အရမ်းဖြစ်တာ။ ဘယ်လောက်တောင်အကျိုးပေးသလဲဆို တစ်ခါ သား ၀က်သားလေးတွေပေါက်တော့ ၀က်မကြီး မှာရှိတဲ့ နို့တိုင်ထက် ၀က်ကလေးတစ်ကောင်ပိုနေလို့ နို့တိုက်ချိန်တိုင်း တစ်ကောင်ကို လက်ထဲမှာထိမ်းထားပြီး အလှည့်နဲ့ တိုက်ရတယ်။ နောက်မို့ ဆို တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်နို့လုရင်း ကိုက်ရင် အနာတွေဖြစ်တတ်လို့။ အဖေဆို ၀က်တွေမွေးရင်းနဲ့ ၀က်မလေးတစ်ကောင်ကို အတော်သံယျောဇဉ်ရှိတာကလား။ သူမြို့ထဲမှာ တစ်လသင်တန်းသွားတက်တော့ အဲဒီဝက်မလေးကို သင်တန်းခေါ် သွားတာ။ သူ့ဝက်မက ရင်ကျပ်လို့တဲ့ ။ ကြားဘူးကြလားတော့ မသိဘူး ။ အခုပြန်တွေးရင်တော့ ရယ်ချင်စရာကြီး ။ တစ်ခါကြည့်ရဘူးတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကားထဲက ၀က်ကလေးပွေ့ထားတဲ့ ခရီးသည်ကိုမြင်ပြီး ရယ်ချင်နေတယ်။
၀က်တွေမွေးရာကနေ နောက်ပိုင်း နှင်းဆီပန်းတွေစိုက်တာ ခေတ်စားလာပြန်တယ်။ အိမ်နားက တောတောင်အရိုင်းတွေကို ရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ပြီး စိုက်ကြရတာ။ တစ်ခါသား ရှင်းရင်းနဲ့ အရင်လူဟောင်းတွေ စိုက်ခဲ့တဲ့ အာတာလွတ်ဥခင်းက ရလာတဲ့အာတာလွတ်ဥ ဖြူဖြူနုနုထွားထွားကြီး တွေကို ပြုတ်ပြီး ဆီဆားလေးနဲ့ တို့စားကြတာ သိပ်အရသာရှိတာပဲ။ ခုထိမမေ့ဘူးရယ်။
နှင်းဆီပန်းစိုက်တယ်ဆိုတာ ပြောတော့သာလွယ်တာ။ အတော်ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်ပါ။ အဖေတွေ အကိုတွေက ရေထမ်းပြီး ရေလောင်းရတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းပေးရတယ်။ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ကြက်ချေး၊ နွားချေး၊ အစရှိုသည် ထည့်ပေးရတယ်။ နှင်းဆီပင်တွေက အပွင့်ကလေးတွေကသာ လှတာ။ သူတို့က ကြက်ခြံတွေကရတဲ့ ကြက်ချေးဖွဲလို့ ခေါ်တဲ့ စပါးခွံတစ်ဝက် ကြက်ချေးတစ်ဝက်ရောထားတဲ့ မြေသြဇာကို သိပ်ကြိုက်တာ။ အဲဒါများထည့်ပြီးရင် အပွင့် တွေက အရောင်ကလေးတွေ တောက်ပြီး အပင်ကလည်းသန်လာတာ မြေစို့ ကြီးတွေက မျှစ်စို့ပေါက်ကြီးတွေကျလို့။
အဲဒီ ကြက်ချေးမြေသြဇာကြောင့်လားတော့ မသိဘူး။ နှင်းဆီပင်ကို အမြဲဖျက်ဆီးတဲ့ ပိုးတစ်မျိုးရှိတယ်။ ပင့်ကူနီလို့ ခေါ်တယ်။ သူက အရွက်အောက်ကို လှန်ကြည့်လိုက်ရင် အနီရောင် ကြက်သန်းလောက်အရွယ် မွှားမွှားလေးတွေ ။ မွစာကျဲလို့ ။ အဲလို နှင်းဆီပင် ပင့်ကူနီကျပြီဆို ခြံတိုင်းလိုလို အားလုံးအတူ ကျကြတာပဲ။ သူကအရွက်ကနေတဆင့် သစ်ပင်က အဟာရတွေ အကုန်စုတ်တာဆိုတော့ သစ်ပင်ကအားပြတ်ပြီး ပန်းတွေကလဲ သိပ်မပွင့်တော့ဘူး။ အရင်ကတော့ အင်ဒရင်းနဲ့ဆို တော်ရုံဟာနိူင်ပေမဲ့ အဲဒီတစ်ခါတော့ ပန်းစိုက်သမားတွေ အားလုံးငိုရတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ် စိုက်သလိုပဲ။ အဖေတို့ ပန်းစိုက်သူတွေ အတွက် စီးပွားပျက်ကပ်ပဲပေါ့။
အဲဒီမှာ အဲဒီပိုးကို နိူင်တဲ့ ဆေးတစ်မျိုးကို တစ်ယောက်ယောက်က ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ မတောက်တစ်ခေါက်တတ်တဲ့ မဆွိတီတို့ အမေဟာ နိူင်ငံခြားက သူ့သူငယ်ချင်းပို့တဲ့ နှင်းဆီပန်း စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်လေး ဖတ်ရင်း တွေ့သွားတာပါ။ အဲဒီဆေးများ ဖြန်းလိုက်ရင် ပိုးတွေသေတဲ့ အပြင် အပင်ကိုပါအားကောင်းစေပါသတဲ့။ သူက အထက်ကပြောခဲ့သလို အင်ဒရင်းထက် ပျင်းပြီး အနံ့ အတော်ဆိုးဝါးတယ်။ အဲဒီဆေး ရှိတယ်ဆို ညာလို့မရဘူး။ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ အနံ့ ကရနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီဆေးက အဲလိုအနံ့ ပျင်းလွန်းလို့ ဆက်မထုတ်တော့ဘူး။ ရပ်လိုက်ပြီတဲ့။
ဒီမှာ စနေ၊ဗုဒ္ဓဟူးအတွဲက ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ ရထားကြီးစီးပြီး ၀ါခင်းတွေစိုက်ရာ အမေတို့ ရွာဆီ ချီတက် ဆေးရှာပုံတော် ဖွင့်ပါတော့တယ်။
အမေတို့ ပြောပြချက်အရ ရွာမှာလဲ ဆေးကအလွယ်တကူ ရှာမရတော့ဘူးတဲ့လေ။ သူတို့တွေက အဲဒီဆေးကို နံလွန်းလို့ ဆေးပုတ်ကြီးလို့ ခေါ်ကြပါသတဲ့ ။ ဘယ်သူမှလဲ မသုံးတော့ပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းချင်တော့ ပြန်ခါနီး တစ်ညနေ ရွာကလှည်းကြုံစီးပြီး ဟိုဒီလျှောက်ကြရင်းနဲ့ လှည်းပေါ်မှာ ပိုးသတ်ဆေးနံ့ ခပ်ပျင်းပျင်း အနံ့ရတော့ အဖေက၀င်စပ်စုတော့ လားလား တွေ့ပါပြီ။ လှည်းရှေ့နားမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း လိုက်ရှာနေတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးပုံး။ လှည်းသမားက အိမ်မှာထားတာ နံလွန်းလို့ သွားလွှင့်ပစ်တော့မလို့ဆိုပဲ။
နောက်ဆုံးတော့ အဖေတို့လဲ လှည်းဆရာကို ၀မ်းသာလွန်းလို့ မုန်ဘိုးပေးပြီး ပစ္စည်းယူပြီး ပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲသည်ပိုးသတ်ဆေး ကောင်းမှုနဲ့ပဲ မဆွိတီတို့ မောင်နှမတွေ အဖေအလုပ်ကထွက်ပြီး လူငှါးတွေငှါးပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို အကြီးအကျယ်ဇောက်ချလုပ်ရင်းနဲ့ ကျောင်းပညာတွေသင်၊ အကိုတွေလဲ နိူင်ငံခြားပို့နိူင်ခဲ့တယ်။
အော် ... အခုတော့ အဖေလဲ ဘုရားတရားစလုပ်တဲ့အချိန် အသက်၄၀ ကျော်လောက်ကစလို့ ပိုးကောင်လေးတွေ သတ်ရတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကို စွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ အဖေအမြဲပြောတယ်။ သူ့ဘ၀မှာ သူအကုသိုလ်တွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ကြည့်စမ်း ပိုးတွေသတ်ဖို့ ဘယ်လောက်တောင် အကုသိုလ်များလိုက်လဲတဲ့။ သူအဲအချိန်က ဘုရားမှန်း၊ တရားမှန်း မသိတတ်ခဲ့လို့ နားမလည်ခဲ့ လို့ ဆို နောင်တရကြောင်း တဖွဖွပြောလေ့ ရှိတော့ မဆွိတီအဖေ့ အတွက် အတော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လေ။
Posted by T T Sweet at 12:20 AM7comments:
Posted by T T Sweet at 4:06 AM7comments:
ဒီနေ့တော့ မဆွိတီ ဂျင်းကြက်သားကြော် (Ginger Chicken ) ဘယ်လိုကြော်ရလဲ ပြောပြမယ်နော် ... ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်နဲ့ နဲနဲတော့ဆင်ပါတယ် ... သူကဂျင်းလေးတွေ ပိုများပြီး ပိုမွှေးပါတယ် ... ၀က်သားနဲ့ ကြော်ရင်လည်း ရပါတယ် ...
၁။ ကြက်သားရင်ပုံ တစ်ခုကို လက်မတစ်ဆစ်လောက် အတုံးလေးတွေ တုံးပြီး ပဲငံပြာရည် အကြည်ရည် ဆား သကြား အချိုမှုန့် သင့်သလိုနယ် ပြီးရင်နာရီဝက်လောက်နှပ်ထား၊
၂။ ငရုပ်သီးခြောက် ၁၀တောင့်လောက်ကို အညှာချွှေထား၊
၃။ ဂျင်းလက်မအရွယ်၅ခုလောက်ကို ပါးပါးရိတ်ရိတ်လေးတွေလှီးထား
၄။ Sweet Bean လို့ခေါ်တဲ့ ပဲသီး ၁၀တောင့် ၁၅တောင့်လောက်ကို ဟိုဘက်ဒီဘက် အညှာချွေထား၊ (ရွှေပဲသီးအပြားလေးတွေဆိုလဲရပါတယ်)
၅။ မုံလာဥနီ တစ်ပိုင်းလောက်ကို ပါးပါးလေးတွေလှီးထား (လှချင်ရင်တော့ ပန်းပွင့်ပုံလေးတွေလှီးပေါ့)
၆။ ကြက်သွန်နီ ဥကြီးကြီး၂လုံးလောက်ကို ရှစ်စိတ်စီစိတ်ပြီး အဖတ်ကလေးတွေခွါထား၊
၇။ Spicy black bean sauce တစ်ဇွန်း မောက်မောက် (စလုံးမှာတော့ ဘယ် NTUC ဆိုင်မှာမဆို ၀ယ်လို.ရပါတယ် KUM KEE တံဆိတ်ပါ ပုံမှာကြည့်ပါ)
၈။ သကြား စားပွဲဇွန်း တစ်ဇွန်း၊
၉။ ပဲငံပြာရည် အကြည်ရည်တစ်ဇွန်းလျော့လျော့ (Tiger တံဆိတ် အနီရောင်ကိုသုံးပါတယ်၊ အစိမ်းရောင်က အနီလောက်မကောင်းပါ)
၁၀။ ပဲငံပြာရည် အနောက်ရည် (အရောင်လေး လှအောင် နဲနဲထည့်ပါ)
၁၁။ ကြက်သွန်မြိတ်၃-၄ပင်လောက်ကို ခပ်ရှည်ရှည်လေး လှီးထား၊
၁၂။ ဆီ စားပွဲဇွန်း ၄ဇွန်း
အပေါ်ကပစ္စည်းတွေ အားလုံး ပြင်ပြီးပြီဆို ပထမ ဒယ်အိုးကြီးကြီးထဲမှာ ဆီထည့်ပြီး မီးပြင်းပြင်းနဲ့ထားပါ ... ဆီကျက်ရင် ငရုပ်သီးခြောက်လေးတွေကို ညိုပြီး ကျွတ်လာတဲအထိ ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ ...
ပြီးရင် အဲဒီဆီထဲမှာပဲ ဂျင်းပါးပါး လှီးထားတာထဲက တစ်ဝက်လောက်ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ ... ဂျင်းညှိုးပြီး မွှေးနံ.ထွက်လာရင် ကြက်သားတုံးလေးတွေထည့်ပြီး ဆက်မွှေပါ ... ဂျင်းနံ့လေးတွေကြက်သားထဲကူးသွားအောင်ပါ ...
၂မိနစ်လောက်ကြာလို. ကြက်သားတုံးလေးတွေ အပေါ်ရံတင်းပြီးမာလာရင် နံပတ်၃ကနေ နံပတ် ၁၀ထိ အစဉ်အတိုင်း တစ်ခုစီ ရောထည့်ပြီး ဖွဖွလေးမွှေပေးပါ ... ပဲသီးလေးတွေကျက်ပြီဆို အားလုံးလဲကျက်လောက်ပါပြီ ... ကြက်သွန်မြိတ်လေးထည့် အပေါ့အငံ မြည်း လိုရင်ထပ်ထည့်ပြီး ချလို့ရပါပြီ ...
(ပဲသီးလေးတွေ စိမ်းနေတုံးချပါ ... ပဲသီးအရောင် ၀ါသွားရင် စားလို့လဲမကောင်း ကြည့်လို့လည်း မလှပါ) ... အော် ...မေ့လို့ စားခါနီး ငရုပ်သီးတောင့်ကြော်လေးလဲ ရောထည့်လိုက်ပါအုံး ...
အနှစ်နဲ. ကြိုက်တတ်ရင် ကျက်ခါနီး ကော်ရည်လေးသင့်သလိုထည့်ပြီး မှ ပျစ်ပျစ်လေး ချပါ ... သကြားနဲ့ ပဲငံပြာရည်လေး ပိုထည့်ပေါ့ ... မဆွိတီကတော့ ကော်ရည်မပါတာ ပိုကြိုက်ပါတယ် ...အခုချက်တာလည်း ကော်ရည်မထည့်ပါ ...
ကဲ ... စားလို.ရပါပြီရှင် ဂျင်းနံ့သင်းသင်းလေးနဲ.ပါ ... ထမင်းဖြူလေးနဲ. လိုက်ပါတယ် ...ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်း ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ လွှေးပေါ့ကွယ် ...
Posted by T T Sweet at 1:46 AM7comments:
Labels: (၅ ၀၀) တရုတ် အစားအသောက်များ, (၅- ၁) Ginger Chicken
Posted by T T Sweet at 3:58 PM5comments: